दशैँ/तिहारको बेला देखिन छोड्यो लिङ्गे पीङ, हराउदै गयो गाउँघरको रौनक ! – ebaglung.com
दशैँ/तिहारको बेला देखिन छोड्यो लिङ्गे पीङ, हराउदै गयो गाउँघरको रौनक !
२०७४ आश्विन १२, बिहीबार १८:०६	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
थम्मन थापा, बागलुङ २०७४ असोज १२ । महान चाड बडा दशैं तथा तिहारमा पहिले पहिले राखिने लिङ्गे पिङ हिजो आज बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका भित्रका गाउँ गाउँमा हराउदै गएको छ। केही बर्ष अघिसम्म दशैँ तिहार जस्ता चाडमा प्राय गाउॅ टोलमा लिङगे पिङ हालिन्थ्यो तर पछिल्लो समय गाउँगाउँमा खेलिने लिङगे पिङको चलन विस्तारै हराउदै गएको छ ।
गाउॅघरका युवा देखि बुढापाका मिलेर खरबारीमा गई बाबियो काटेर रातमा पिङको लुठो बाटेर दिनमा बाासको ४ ओटा लिङगा गाडी पिङ बनाउने गरिन्थ्यो । दशैंको सुरुवातदेखि हालेको पिङ तिहारसम्मै राखिन्थ्यो तर अहिले गलकोट क्षेत्रका युवाहरु रोजगारीको सिलसिलामा गाउँबाट बिहिर देशहरुमा जान थालेसँगै दशैंमा रौनक थप्ने लिङ्गे पिङ खेल्ने संस्कृती हराउॅदै गएको हो ।
‘दशैँका बेला गाउका डााडाहरुमा जम्मा भएर सामुहिक लिङगे पिङ खेल्ने, रमाईलो गर्ने परम्परा विस्तारै हराउॅदै गएको गलकोट नगरपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष सुवेदार टिका बहादुर थापाले बताए । विशेष गरी युवा पुस्ताले लिंगे पिङ निर्माण गरेर खेल्ने र रमाईलो गर्ने चलन थियो, अहिलेको पुस्ताले यस्ता कुरा खासै चासो नदिने गरेको थापाको भनाई छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिको विकास भएसँगै गाउॅघरमा समेत मनोरञ्जनका अन्य साधनहरु प्रसस्तै आएकाले पनि पिङतर्फ आकर्षण घटेको बुढापाकाहरु बताउॅछन । यस क्षेत्रका युवाहरु रोजगारीको लागि प्राय जापान, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, युके सॅगै खाडी मुलुक मलेसिया, कतार र दुवईमा गएका छन । युवाहरु विदेशिएका कारण पिङ बनाउने जनशक्तिको अभाव समेत बढदै गएको छ ।
पिङ बनाउनको लागि बाबियो काटेर ल्याउने, लुठो बाटन र ४ वटा बास गाडन कम्तिमा ८र १० जना आवश्यक पर्दछ । गाउॅमा युवा पुस्ताको अभावले महान चाड बडा दशैं तिहारमा निर्माण गरि खेल्ने लिङगे पिङको प्रचलन विस्तारै हराउॅदै गएको छ ।
पिपलको रुखमा समेत लुठे पिङ राख्ने गरिन्थ्यो । तन्नेरी ठिटा र ठिटीको समेत पिङमा दोहोरी खेल्ने प्रचलन थियो तर गाउॅघरमा फाट्ट फुट्ट भएका युवाहरु पनि व्यावसाय र रोजगारमा हुनुले पनि लिङगे पिङको संस्कृति लोप हुदै गएको हो ।
महाअष्टमीको शुभअवसरमा जैदी थन्थाप भगवती माईस्थानमा देवीको मुर्ती स्थापना
५० वर्षमा नभएको विकास पाँच वर्षमा गरेर देखाउँछु : वडाध्यक्ष शाही